« Permis de construire » - CUA:Mamita-bahoaka… -
AccueilRaharaham-pirenena« Permis de construire » – CUA:Mamita-bahoaka…
Efa niteraka resa-be ary nampiaka-peo ny mponin’Antananarivo mihitsy ny fomba ratsin’ny mpitantana ny kaominina Antananarivo-Renivohitra (CUA) amin’ny famitaham-bahoaka sy fambotriana ny mponina teo aloha teo.
Amin’izao fotoana izao, miverina indray izany. Nanambara mantsy ny teo anivon’ny kaominina fa mbola mitohy ny fandraisana ireo antotan-taratasy fangatahana fahazoan-dalana manangana sy manamboatra trano eo amin’ny fari-piadidiany. Mitohy hatrany ihany koa ny fakana vola amin’ny fikarakara ireo antotan-taratasy fangatahana fahazoan-dalana ireo, izay mitentina 200 000 Ar isaka ny antotan-taratasy iray fangatahana. Voalaza fa mbola mitohy mantsy ny hetsika ka mampahafantatra ny mponina izy ireo fa hatramin’ny 21 Desambra izao indray ny fara fandraisana ireo antotan-taratasy sy ny fandoavana ny vola amin’ny fikarakarana izany.
Hatreto, tsy mazava intsony ny tian’ny kaominina atao. Efa maro ireo mponina no nahazo fahazoan-dalana amin’ny fanorenana trano fonenana teo aloha teo, tamin’ity hetsika nataon’izy ireo ity. Taty aoriana anefa, nanatanteraka fandravana trano ny CUA ka nisy tamin’ireo olona efa nahazo taratasy fahazoan-dalana manorina trano no voakitika tamin’izany fandravana nataon’ny kaominina izany. Inona izany no tian’ny kaominina sy ny mpitantana hahatongavana amin’izany?
Tsotra, mampijabaka vahoaka indray izy ireo ny amin’ny tokony hikarakarana ny taratasy fahazoan-dalana manorina trano fonenana mba hangalana sy hitakiana vola indray. Izany hoe, lasa fitadiavam-bolan’ny mpitantana ny kaominina Antananarivo-Renihohitra ity hetsika fanomezan-dalana fanorenana trano ity.
Tsy misy izay tsy miaiky ny adalan’ireo mpitantana eo anivon’ny CUA sy ny tsy fahaiza-mitantana ny mponina. Ary efa nanamafy izany tamin’ny alalan’ny am-pamoaka ny mpanolontsaina monisipaly iray eo anivon’ny CUA, tamin’ny herinandro lasa. Noho izany fomba ratsy izany, tsy mahazo fitokisana amin’ny vahoaka intsony ireo mpitantana, na inona fanazavana omeny na inona. Hatreto mantsy, tsy hita akory izay zavatra mivaingana hatramin’ny nitantanan’i Lalao Ravalomanana ny kaominina Antananarivo-Renivohitra. Tsy hita izay fanatsarana ny tanàna fa dia fitadiavam-bola amin’ny tombontsoa manokana no mibahan-toerana amin’ilay fitantanana ka lasa sorona amin’izany ny mponin’Antananarivo.